ပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုပဲ Jailbreak ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည် ငါက Mac ပါ
ပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲ Jailbreak ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်
အသုံးချ | | အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ 12/10/2019 19:35 | NOTICIAS
ယခုတိုင်အောင်, မဆိုဗားရှင်း jailbreak အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်၊ iPhone, iPad သို့မဟုတ် iPod touch ပေါ်တွင်၎င်းကိုဖယ်ထုတ်ရန်၊ ၎င်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းကိုဖျက်ပစ်ပြီးစက်ရုံအခြေအနေတွင် ထား၍ operating system ကိုထပ်မံတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Cydia Impactorဤအရာအလုံးစုံလိုအပ်သည်။
ပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲ jailbreak မှနှုတ်ဆက်ပါသည်
Saurik သည်ကမ္ဘာ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည် jailbreakသူစတင်ခဲ့သည် Cydia Impactor၊ သငျသညျလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ tweak unjailbreak လုပ်ပါ သင့် iPhone, iPad နှင့် iPod Touch များသို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းစရာမလိုပါ။
အကယ်၍ သင်၏ပစ္စည်းကိုအခြားသူတစ် ဦး ဦး ထံရောင်းချင်လျှင်သို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းလိုလျှင် ၄ င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည် jailbreakအကယ်၍ သင်သည်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်လိုလျှင် jailbreak နင်ကနင့်ကိုနင်ပြောချင်ရင်မှစ jailbreak သင်မလိုအပ်ဟုသင်ထင်သောကြောင့်၊ Cydia Impactor ဖြေရှင်းနည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူမှအနည်းဆုံးအရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည့်အတွက်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
Cydia Impactor ပြုပြင်မွမ်းမံထားသော်ငြားလည်းဖျက်သိမ်းခြင်းမပြုသောစက်ပေါ်ရှိဖိုင်များအားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် jailbreak Apple ကနေတိုက်ရိုက်ပြန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ၎င်းသည်အသေအချာတွက်ချက်ထားသောဖိုင်ပြောင်းရွှေ့ထားသောစီးရီးဖြစ်ပြီးဖိုင်အသစ်များအားလုံးကိုအသုံးပြုသူအခန်းကန့်သို့ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီး၊ စနစ်ဒေတာအားလုံးကိုစနစ်အခန်းကန့်သို့ပြန်ပို့သည်။
အချို့သောအခိုက်၌ရှိလျှင် Cydia Impactor ဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပျက်ကွက် jailbreak ဒါမှမဟုတ် device reboot, ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်မှထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် file system ထဲသို့အပြောင်းအလဲအားလုံးပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် user data အားလုံးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး iOS operating system သည် "အကြောင်းအရာများနှင့် settings အားလုံးကို reset" ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ထံမှထောက်ပြအဖြစ် iClarified၊ စိတ်ကူးမှာဤ "အရေးကြီးသော ၀ င်းဒိုး" သည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်လိုသောကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိအချက်အလက်ပေါ် မူတည်၍ မိနစ်အနည်းငယ်မျှကြာသောလုပ်ငန်းစဉ်၏နောက်ဆုံးစက္ကန့်အနည်းငယ်သာကြာသည်။ jailbreak.
Device reboot လုပ်တဲ့အခါမှာသဲလွန်စမရှိဘဲနဲ့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တူလိမ့်မယ် jailbreak
ထပ်လုပ်ဖို့ jailbreak သင့် iPhone၊ iPad သို့မဟုတ် iPod touch တရားမျှတ လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလိုက်နာပါ.
သတိပေးချက် - Cydia Impactor ၎င်းသည် iOS 8.3 နှင့် iOS 8.4 အတွက် beta ဗားရှင်းသာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ဒေတာနှင့်ဖိုင်များအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမပြုလုပ်ရန်ဘယ်တော့မျှမမေ့ပါနှင့်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » ပြန်လည်ပြုပြင်စရာမလိုဘဲ Jailbreak ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်